अलबिदा राष्ट्रकवि घिमिरे ! (स्मरण) | Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
अलबिदा राष्ट्रकवि घिमिरे ! (स्मरण)
२०७७ भाद्र ६, शनिबार ११:५१ गते
थुतिन्छ पात जब खात खात
सिद्धिन्छ शोभा अनि फूलबाट ।।
‘एउटै सानो सरल कृतिमा पूर्ण संसार देऊ’, ‘यो नेपाली शिर उचाली…’, ‘लाग्दछ मलाई रमाइलो…’, ‘आज र मैले के देखेँ सपना मै मरि गएको…’ जस्ता दर्जनौँ सूक्तिमय रचनाका रचनाकार हुन्, राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरे । लमजुङको पुस्तुनमा १०१ वर्षअघि १९७६ असोज १ गते जन्मिएका हुन् घिमिरे । उनले सर्वदर्शन विषयमा शास्त्री तहसम्मको औपचारिक शिक्षा हासिल गरेका थिए ।
उनले १९९९ सालमा भाषानुवाद परिषद्बाट जागिरे जीवन आरम्भ गरेका हुन् । उनी २००२ सालमा गोरखापत्रका सहायक सम्पादक बनेका थिए । २००५ सालमा उनी आधार शिक्षाका प्रधानाध्यापक पदमा कार्यरत रहे । २००९ सालमा शिक्षण केन्द्रका शिक्षक, २०१० सालमा नेपाल–भारत मैत्री संघका अध्यक्ष बन्न पुगे । २०१२ सालमा उनी नेपाल लेखक संघका अध्यक्ष र कलेज अफ एजुकेसनका लेक्चरर बने । २०१४ सालमा काव्य प्रतिष्ठानका सदस्य भए । २०३५ सालमा उनी यसै प्रतिष्ठानका उपकुलपति बन्न सफल बने । २०४६ सालसम्म आइपुग्दा उनी यसै प्रतिष्ठानका कुलपति बने ।
१९९२ सालमा गोरखापत्रमा ‘ज्ञानपुष्प’ कविता छपाएर नेपाली साहित्याकाशमा उदाएका कवि घिमिरेका १९९४ सालमा ‘नवमञ्जरी’ कवितासंग्रह, २०१० सालमा ‘घामपानी’ कवितासंग्रह, २०१३ सालमा ‘पापिनी आमा’ खण्डकाव्य, ‘नयाँ नेपाल’ खण्डकाव्य, २०१५ सालमा ‘गौरी’ शोककाव्य २०१७ सालमा ‘राजेश्वरी’, २०२३ सालमा ‘राष्ट्रनिर्माता’, २०३० सालमा ‘धर्तीमाता’, २०३२ सालमा ‘शकुन्तला’ नाटक, र २०३५ सालमा ‘राहुल यशोधरा’ खण्डकाव्य, यसै वर्ष ‘मालती मंगले’ गीतिनाटक, २०५३ सालमा ‘अश्वत्थामा’ नाटक, २०५४ सालमा ‘विषकन्या’, यसै वर्ष नै ‘हिमालवारि हिमालपारि’, २०५५ सालमा ‘देउकी’ र २०६१ सालमा ‘बालकुमारी’ नाटक प्रकाशित भएका छन् । स्वयं राष्ट्रकविले ‘ऋतम्भरा’ महाकाव्य लेखनकार्य जारिरहेको जानकारी गराए पनि पूरा भए नभएको बारे उल्लेख गरिएको पाइन्न ।
राष्ट्रकवि घिमिरेले विभिन्न संघसंस्थाहरुबाट अनेकौँ मानसम्मान र अभिनन्दन पत्रहरु प्राप्त गर्नुका साथै कैयौँ पुरस्कार पनि हासिल गरेका छन् । तीमध्ये उनले २०३३ सालमा त्रिभुवन प्रज्ञा पुरस्कार, २०५२ सालमा आदिकवि भानुभक्ताचार्य पुरस्कार मुख्य छन् । उनका कृति, प्रवृत्ति र योगदानको कदर गर्दै तत्कालीन शाही सरकारले राष्ट्रकवि पदवीबाट अलंकृत गरेको थियो । उनलाई स्वस्फूर्तरुपमा नागरिकहरुले राजधानीदेखि देशका मुख्य शहरहरुमा रथाभिनन्दन गरी सम्मान अर्पण गरेका थिए । उनको योगदानको स्मरण गर्दै नेपाली सेनाले उनलाई मानार्थ रथि पद प्रदान गरेको थियो ।
आधारभूत तहदेखि विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर तहसम्मै उनका कृतिहरु पाठ्यक्रममा समावेश गरिएका छन् । यसका साथै उनको व्यक्तित्व र कृतित्वमाथि अध्ययन अनुसन्धान गरी धेरै अनुसन्धाताले दर्शनाचार्य र विद्यावारिधि उपाधि हासिल गरिसकेको पाइन्छ । उनका रचनामा केन्द्रित रही धेरै अनुसन्धान कार्य भएका छन् । यसबाट पनि उनको नेपाली साहित्यमा रहेको प्रभाव, प्रवृत्ति र योगदान स्वतः झल्कन्छ ।
मूलतः उनी हुन् स्वच्छन्दतावादी कवि । राष्ट्रियता, प्रकृतिप्रेम, मानवतावाद, प्राचीन धर्म–संस्कृतिप्रति अतिशय मोह, जीवन र जगत्प्रति आशावादी दृष्टिकोण, लोकबाजा, लोकपरम्पराप्रति अपार स्नेह, वस्तुताभन्दा आत्मिकता र हार्दिकताको स्वस्फूर्त उच्छलन आदि इत्यादि हुन् स्वच्छन्दतावादका मूलभूत वैशिष्ट्य । यी विशेषता प्रायः मिल्छन् घिमिरेका काव्यमा । यस दृष्टिले उनी लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाका लेखकीय प्रवृत्तिसँग सामीप्य राख्तछन् ।
आंशिकरुपमा उनका काव्यमा परिष्कारवादी चेतना पनि फेला पर्दछ । उनी हरेक रचनालाई पटकपटक उच्च परिष्कृति दिन्छन् र मात्र त्यसलाई प्रकाशनमा ल्याउँछन् । यसर्थ उनका रचनामा सुन्दर पदचयन र कलात्मक कालिगढी फेला पर्दछ । चाहे त्यो गीतमा होस् या कवितामा या खण्डकाव्य जुन कुनै रचनामा यो प्रवृत्ति देख्न सकिन्छ । कल्पना, भावना र हार्दिकतामाथि कताकता बुद्धि र विवेकको नियन्त्रण रहेको देखा पर्दछ । यस दृष्टिले हेर्दामात्रै पनि उनी कविशिरोमणि लेखनाथ पौड्यालझैँ परिष्कारवादी पनि लाग्छन् ।
यसर्थ, मूलप्रवृत्तिका दृष्टिले राष्ट्रकवि घिमिरेमा देवकोटेली स्वच्छन्दतावाद र कविशिरोमणि लेखनाथीय परिष्कृति फेला पर्दछ । यसर्थ, यी दुवै प्रवृत्ति यिनका रचनामा फेला पर्दछ । उनका कृतिहरुमध्ये फुटकर रचनामा राष्ट्रप्रेम, मानवतावाद, जीवनवादी चिन्तन, स्वजातीय संस्कृति र सभ्यताप्रति गौरव र राष्ट्रियताप्रति महानताबोध गरिएको फेला पर्दछ । त्यस्तै, त्यसमा शहरी सभ्यताभन्दा ग्रामीण परिवेश र पर्यावरणको जीवन्त चित्रण गरेको छ । राष्ट्रिय एकता र अखण्डता नै उनका काव्यको स्वर बन्न गएको भेटिन्छ ।
खण्डकाव्यहरुलाई स्थूलरुपमा हेर्दा यी रचनाहरुमा पनि यिनै प्रवृत्ति नै वरिपरि घुमिरहेको लाग्दछ । केही रचनामा पृथक् प्रवृत्ति र विशेषताहरु फेला पर्दछन् । खासगरी, गौरीमा शोकभाव प्रस्तुत छ । पत्नी गौरीको निधनबाट उत्पन्न शोकभाव साधारणीकृत भई पत्नीको विरह भोग्न विवश पुरूषको अभिव्यक्ति बन्न गएको छ यसमा । यस्तै, राजेश्वरी खण्डकाव्यमा राजा रणबहादुर शाहको देहावसानपछि सती जानका निम्ति हेलम्बू निर्वासित गरिएकी महारानी राजेश्वरीलाई ल्याएर पतिसँगै जिउँदै जलाउने तत्कालीन कुत्सित राजनीतिक परिवेशको जीवन्त पटाक्षेप गरिएको छ यसमा ।
कवि यसमा ‘मान्छेबाट नकाट सुखदुःखको एउटै पनि यो क्षण’ भन्दै आग्रहका रुपमा र ‘कालैलाई पछार्न सक्छ जसले खेलेर कुस्ती तर मान्छेकै अघि हार्नुपर्छ यदि छन् मान्छे बने निष्ठुर’ भन्दै कोमलभाव प्रकट गर्दछन् । यी दुवै पद्यांशलाई हेर्दा यसमा मान्छेको त्रूmरताप्रति आक्रोश र मानवतावादी दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्दछन् ।
‘राष्ट्रनिर्माता’मा राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र अखण्डताका पक्षमा उभिन्छन् र राज्य भनेको शिकारीले शिकार बिलो लगाएर लिएजस्तो नभएको तर्क प्रस्तुत गर्दछन् । यहाँ उनीभित्रको स्वदेशप्रेम उन्नत बन्न गएको देखिन्छ । ‘नयाँ नेपाल’मा नेपाल विश्वमा हरेक दृष्टिले उन्नत रहेको भाव व्यक्त गर्दछन् । ‘धर्तीमाता’मा हिमवत्खण्डका रुपमा रहेको यो भूमि तपोभूमि रहेको यथार्थ उजागर गरेका छन् । ‘पापिनी आमा’ काव्यमा उनी बच्चा जन्माएर त्यसलाई परित्याग गर्ने आमाप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै जन्म दिएपछि त्यसलाई जीवन पनि दिनुपर्ने दृष्टिकोण राख्तछन् ।
‘इन्द्राकुमारी’ मा तत्कालीन राजनीतिक परिवेश प्रस्तुत गर्दछन् । ‘गौँथली र गजधम्मे’मा नारीलाई अप्सराका रुपमा र गौँथलीलाई अन्नपूर्णाका रुपमा, गजधम्मेलाई गीत र लाठीका रुपमा तथा समाजलाई चाहिँ लट्टे जोगीका रुपमा प्रस्तुत गरी कलात्मक सौन्दर्य सृजना गरेका छन् । ‘बोराको परदा’मा समसामयिक सामाजिक परिवेशलाई सशक्तरुपमा चित्रण गरेका छन् राष्ट्रकवि घिमिरेले ।
उनका ‘शकुन्तला’, ‘विषकन्या’, ‘अश्वत्थामा’ जस्ता नाटकमा पूर्वीय साहित्यहरुमा प्रसिद्ध कथावस्तु वरण गरिएको देखिन्छ । ‘हिमालवारि र हिमालपारि’, ‘देउकी’र ‘बालकुमारी’ मौलिक कथावस्तुमा आधारित देखिन्छन् । तीमध्ये ‘देउकी’ र ‘बालकुमारी’ नेपाली संस्कृतिसँग जोडिएका विषय आएका छन् । यसमा उनले विषयवस्तु र शैली शिल्पगत दृष्टिले पनि पर्याप्त नवीनता थपेका छन् ।
यसअतिरिक्त राष्ट्रकवि घिमिरे एक कुशल शिक्षक तथा शैक्षिक व्यवस्थापकका रुपमा पनि चिनिन्छन् । उनी प्रधानाध्यापक, प्रज्ञाप्रतिष्ठानका उपकुलपति र कुलपति पदमा आसीन भई ती संस्थाहरुलाई कुशल नेतृत्व प्रदान गरेको पाइन्छ । यस दृष्टिले उनी एक कुशल प्रशासक व्यक्तित्वका रुपमा गनिन्छन् । लेखक संघको नेतृत्वमा रहेर कैयौँ लेखकलाई सही मार्ग देखाउनमा उत्तिकै भूमिका खेलेको पनि भेटिन्छ । नेपालको पहिलो दैनिक पत्रिका गोरखापत्रका सहायक सम्पादकका हैसियतमा कार्य गर्नुका साथै इन्द्रेणी साहित्यिक पत्रिकाका सम्पादकका रुपमा रहेर पनि कार्य गरेको पाइन्छ । महाकवि देवकोटासँगै भाषानुवाद परिषद्मा जागिर खाइरहँदा र उनीसँगै एफ्रो–एसियाली सम्मेलनमा रुसको तासकन्दमा जाँदा कवि घिमिरेले महाकवि देवकोटासँग बिताएका पल र क्षणहरु निकै स्मरणीय लाग्दछन् ।
यसर्थ, बहुआयाम बोकेका राष्ट्रकवि घिमिरे नेपाली साहित्यमा सर्वाधिक भाग्यमानी कविका रुपमा चिनिन्छन् । किन पनि भने उनले शासक र शासकीय सत्तालाई चिढ्याएनन् र त्यस्तो चाकडी पनि गरेनन् । यसर्थ, सबै शासन र शासकीय प्रणालीका शासकका उनी प्रिय बनिरहन सके । तिनका मात्र नभई उनी समस्त नेपाली नागरिकका पनि प्रिय र सम्मानित बन्न सके । यस्ता असाधारण क्षमता बोकेका राष्ट्रकवि घिमिरेलाई गुमाउनुपर्दा अहिले सारा नेपालीको मन कुँडिएको छ । आज सामाजिक सञ्जालदेखि अखबारहरुका पेजहरुमा उनीमात्र छाएका छन् । यो नै भाग्यशालीपनको दृष्टान्त हो भन्दा अतिशयोक्ति हुँदैन । आज उनको पार्थिव शरीर हामीसँग छैन, तर उनी आप्mना कर्मले सदा अजर–अमर बनेका छन् । उनको पार्थिव देहले मात्र अलबिदा भनेको छ हामीसँग । साँचो अर्थमा सदा जीवित बनेर गएका छन् उनी । उनीप्रति हार्दिक शब्द–श्रद्धा हाम्रो पनि ।